Mid kamid ah saraakiishii Shabaab ee la socday Xassan Daahir oo baxsaday (Aqri magaciisa). | warsugansomaliya.wordpress.com
Mid kamid ah saraakiishii Shabaab ee la socday Xassan Daahir oo baxsaday (Aqri magaciisa).
Waxaa habeenkii xalay ahaa baxsaday oo aan qeyb ka noqon shaqsiyaadkii lala xiray Xassan Daahir Aweys afhayeenkii hore ee ururkii Xizbul Islaam ee bur-buray kadibna Shabaab kula biiray Xassan Daahir Aweys isaga oo ka war bixiyay markii horaba sida Xamar lagu keenay.
Maxamed Cusmaan Caruus, Afhayeenkii dhanka Howl-galada ee Xizbul Islaami ayaa u sheegay mid kamid ah idaacadaha maxaliga ah in uu xalay si farsameysan uga baxsaday garoonka diyaaradaha Muqdisho kadib markii uu bilaawday Jir-dilka lagula dhaqaaqay gudigii Xasaan Daahir kasoo weday cadaado ee Muqdisho soo gaarsiiyay.
“Waan baxsaday markii arintu xumaatay. Markii horaba innaga oo maxaaabiis ah ayaa nala keenay markii danbana Muqdisho waxaa handadaad iyo dhibaato an la koobi Karin nagula dhaqaqay Nabad-sugida. Aniga markii aan ogaaday in xaalku xunyahay waan xeeladeestay”, Maxamed Cusmaan Caruus ayaa ku waramay.
Waxa uu intaa raaciyay Caruus in uu Muqdisho qeybo kamid ah uu si nabad ah ku joogo iyada oo aan qabin wal wal iyo cabsi toona.
Kama hadlin Caruus in uu ka baqadin qabo in magaalada laga baadi goobo oo isna laga daba geeyo Xassan Daahir uuna xabsi galo, maadaama uusan heysan megengelyo rasmi ah magaaladana aysan joogi Karin cid aan dowladu ka war qabin oo ogolaasho aysan siin.
Odayaashi iyo siyaasiyintii xasan daahir ku soo qanciyay inuu muqdisho yimaado oo iyagiina la jidhdilay isna si xooga cidamadu ula wareegen.
← Odayaashi iyo siyaasiyintii xasan daahir ku soo qanciyay inuu muqdisho yimaado oo iyagiina la jidhdilay isna si xooga cidamadu ula wareegen.
Faah Faahin Dheeraad ah oo ku Saabsan Ciidamada Nabad sugida oo xiray Xasan Dahir Aweys?Yaa la dhaawacay,Yaase la jirdilay? →